United Airlines mametraka jet lag mba hiala sasatra
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » United Airlines mametraka jet lag mba hiala sasatra
United Airlines ny mpanjifa izao dia manana fomba siantifika vaovao hiadiana amin'ny jet lag amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa voalohany amin'i Timeshifter, fampiharana izay mamaritra ny fotoana mety indrindra hijerena sy hisorohana ny fahazavana, fatoriana ary hankafizan'ny kafeinina hanamboarana haingana amin'ny faritra vaovao .
Manomboka anio, ny mpikambana MileagePlus rehetra dia mahazo fidirana amin'ny drafitra jet lag Timeshifter maimaim-poana. Lasibatra ho an'ny mpanjifa manidina faritra telo na mihoatra ny fotoana ny fampiharana ary ho fitaovana manampy azy ireo hitantana ny jet lag eo am-pitetezana manerana ny tamba-jotra manerantany an'i United.
"Tianay ny hanao izay rehetra azonay atao hanatsarana ny traikefa amin'ny fitetezana faritany, na dia fitsangatsanganana any Tel Aviv na fialantsasatra ho any Tahiti izany, ny mpanjifanay dia tokony ho tonga vaovao sy vonona hamely ny tany," hoy ny Vice Filohan'ny Fahatokiana ary filohan'ny MileagePlus, Luc Bondar. "Timeshifter dia maka ny tombantombana rehetra amin'ny fisorohana ny jet lag fa kosa mampiasa siansa sy algorithma handrafetana fitsangatsanganana iray isaky ny zotra. Mpino aho tamin'ny fotoana voalohany nampiasako ilay rindrambaiko ary heveriko fa ho tian'ny mpanjifanay koa izany. ”
Ny Timeshifter dia novolavolain'ny mpikaroka ambony amin'ny torimaso sy ny neurosains amin'ny circadian ary mikendry ny mpanjifa hiampita zana-potoana telo na maromaro. Mampiasa algorithm ny rindrambaiko hanamboarana drafitra ho an'ny mpanjifa mifototra amin'ny lafin-javatra maromaro ao anatin'izany ny torimaso torimaso mahazatra, ny antsipirian'ny sidina ary ny safidin'ny tsirairay, mamorona drafitra fanalefahana jet lag manokana. Ny drafitra tsirairay dia misy:
• Ny torolàlana momba ny fotoana tokony hataon'ny mpitsangatsangana ny laharam-pahamehana amin'ny fahazavana mazava na ialana izany.
• Fandaharam-potoana torimaso sy torimaso mifototra amin'izay tiany manokana torimaso.
• Drafitra hanatsarana ny fihinanana kafeinina ho an'ny fahamailoana sy torimaso.
• Fotoana misafidy hisotro melatonin, raha tokony hisafidy ny mpandeha izany.
United dia misidina ny sasany amin'ireo làlana lava indrindra eto amin'izao tontolo izao, ao anatin'izany ny sidina roa lava indrindra alefan'ny mpitatitra amerikana miaraka amina serivisy tsy an-kijanona eo anelanelan'i Houston sy Sydney ary eo anelanelan'ny San Francisco sy Singapore. Amin'ny volana Desambra, United no ho hany kaompaniam-piaramanidina manidina mivantana avy any Amerika Avaratra mankany Cape Town, Afrika Atsimo miaraka amin'ny fanombohan'ny serivisy vaovao manomboka any New York / Newark. United dia misidina lalana 320 mankany amin'ny toeran-tany iraisana 120 avy any Etazonia
Namoaka fampitandremana momba ny dia ho an'i Bolivia ny birao vahiny UK
Fraport: miadana ny firoboroboan'ny volana oktobra 2019